Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeyn ka dhacday Sh/Hoose. – Gedo Times
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeyn ka dhacday Sh/Hoose.
7th December 2017 admin Somali News, Wararka Maanta 0
Faah Faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay diyaaradaha Dagaalka Maraykanka ku qaadeyn Gaari nuuca weyn oo marayay deegaan ka tirsan Gobalka Shabeelaha Hoose, waxaana ka dhashay Khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Goob joogayaal ayaa Idaacadda Kulmiye u xaqiijiyay in ay Diyaarado ay duqeeyeen Gaari marayay deegaanka Ilimey oo ka tirsan Shabeelaha Hoose waxaana Gaarigaasi la sheegay in ay ku rarnaayeen Waxyaabaha qarxa oo loo soo waday magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa Idaacadda Kulmiye u xaqiijiyay in ay jirto duqeyntaasi Islamarkaana la duqeeyay Gaari ay saarnaayeen Dagaalamayaal ka tirsan Shabaab oo doonayay in ay Qaraxyo ka geestaan Muqdisho.
Maraykanka oo Qudus u aqoonsaday Caasimadda Israel iyo Caro culus oo ka dhalatay.
Fanaanad caan ahayd oo magaalada hargeysa ku geeriyotay